व्यक्तिगत पहलले फेरियो बगर- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
भार्ताका ४० प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
चैत्र १, २०७८ प्रताप विष्ट
हेटौंडा — उमेर १३ महिना, उचाइ ६३ सेन्टिमिटर र तौल ३ केजी मात्र । ख्याउटे गाला, ठूलो भुँडी अनि तिघ्राको मासु मुजा परेको । मकवानपुरको विकट कैलाश गाउँपालिका–८ भार्ताकी अञ्जना चेपाङको अवस्था हो यो । अञ्जनाकी आमा रमिला चेपाङ चौथो बच्चा पाउने तरखरमा छिन् ।
उनका दाइ र दिदीको स्वास्थ्य अवस्था पनि दयनीय छ । ‘उमेरअनुसार उनीहरूको पनि तौल र उचाइ छैन,’ डा. समुन्द्र बजिमयले भने ।
रमिलाका तिनमध्ये कुनै पनि सन्तान स्वास्थ्य चौकीमा जन्मिएनन् । २२ वर्षीया रमिला ४ महिनाकी गर्भवती छन्, तर अझैसम्म जाँच गराएकी छैनन् । यसबारे उनलाई जानकारी पनि छैन । भार्तामा शनिबार आयोजित स्वास्थ्य शिविरमा उनी सन्तानसहित आएकी थिइन् । चिकित्सकले उनको काखको बच्चाको स्वास्थ्य परीक्षणपछि कुपोषण भएको बताए । चिकित्सकले तत्कालै उपचार गर्नुपर्ने बताए पनि गरिबीको भारले थिचिएकी उनी अक्क न बक्क भइन् ।
यस्तै, भार्ताकै ४ वर्षीय रूपक चेपाङको उचाइ एक मिटर मात्र छ, तौल ६ केजी । रूपकलाई स्वास्थ्य परीक्षण गराउन २४ वर्षीया आमा सानीमाया चेपाङले शिविरमा ल्याएकी थिइन् । उनले ११ महिनाकी छोरी पनि ल्याएकी थिइन् । शिविर आइपुग्न २ घण्टा हिँड्नुपर्ने भएकाले २ वर्षीय छोरालाई घरमै छाडेको उनले बताइन् । सानीमाया पनि चौथो बच्चा जन्माउने तयारीमा छिन् ।
गर्भवती भएको ६ महिना भइसक्दा पनि उनले परीक्षण गराएकी छैनन् । उनका सन्तान पनि कुपोषणबाट ग्रसित छन् । १७ वर्षको उमेरमा विवाह गरेकी सानीमायाले १८ वर्षको उमेरमा पहिलो छोरा जन्माइन् । उनलाई पनि गर्भ परीक्षण गर्नुपर्ने र सुत्केरी भत्ता पाउनेबारे केही थाहा छैन ।
अञ्जना र रूपक चेपाङलाई सांग्रिला नामक गैरसरकारी संस्थाले उपचारका लागि आइतबार काठमाडौं लगेको छ ।‘कुपोषणले उनीहरूको अवस्था गम्भीर भएकाले उपचारका लागि काठमाडौं लगेका हौं,’ कार्यक्रम संयोजक सागर थापाले भने, ‘मध्यमखालका कुपोषणको सिकार बनेकाहरूलाई भने यहीं उपचार गरी भिटामिन र पोसिलो खानेकुरा उपलब्ध गराउँछौं ।’
रमिला र सानीमायाका सन्तान मात्र होइन भार्ताका ४० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाहरू कुपोषणबाट ग्रसित छन् । अधिकांश चेपाङ समुदायका बालबालिका कुपोषणले ग्रसित रहेका गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक श्याम महतोले बताए । ‘बालबालिकालाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउँदैनन्, सुत्केरी हुन स्वास्थ्य चौकी आउँदैनन् र गर्भ परीक्षण पनि गराउँदैनन्,’ उनले भने ।
भार्तामा स्वास्थ्य चौकीसहित बर्थिङ सेन्टर पनि छ । खाद्यान्नको अत्यन्त असुरक्षा रहेको बस्तीका बासिन्दा दैनिक ज्यालादारी गरेर कमाएको पैसाले बालबालिकालाई चाउचाउलगायत जंकफुड खुवाउने गर्छन् । ‘बालबालिकालाई ढिँडो, रोटीलगायत गाउँमै उत्पादन भएको खाद्य वस्तु खुवाउँदैनन्,’ भार्ता स्वास्थ्य चौकीकी अनमी जुनेली थापा मगरले भनिन् ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार आव ०७६/७७ मा मकवानपुरका ११ महिना उमेरसम्मका १ सय ४७ बालबालिकासहित २ सय २३ जना कुपोषणले ग्रसित छन् । कोरोना संक्रमणका कारण कुपोषणपीडितको संख्या बढेको अनुमान स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख भीमसागर गुरागाईंले बताउँछन् ।
‘विगतदेखि नै खाद्य असुरक्षा भएको क्षेत्रमा कोरोना महामारीसँगै कुपोषित बालबालिकाको संख्या झन् बढेको हुनुपर्छ,’ उनले भने । स्तनपान, खाद्य असुरक्षा, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र खानामा पोषक तत्त्वको अभावले शीघ्र कुपोषणको समस्या देखिने हेटौंडा अस्पतालका बाल विशेषज्ञ डा. हरिबहादुर खड्का बताउँछन् । ‘कोरोनाले अभिभावकले कमाइ गुमाएका कारण बालबालिकाले समयमा खान पाएनन् र कुपोषणको सिकार बने ।’
प्रकाशित : चैत्र १, २०७८ १२:१९
पहिरोले अवरुद्ध पृथ्वीराजमार्ग खुल्यो
एमालेद्वारा वाग्मती प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध